Uganda Oo Canshuur kusoo Rogtay Kitaabyada Quraanka iyo Ka Masiixiyiinta. – Heemaal News Network
Mas’uuliyiinta dalka Uganda ayaa amar ku siiyay hoggaamiyeyaasha diimaha inay bixiyaan canshuur marka la kala iibsanayo kitaabka Quraanka iyo kan Masiixiyiinta, sida ku xusan warbixin uu qoray wargayska Daily Monitor.
Doris Akol oo ah madaxa waaxda canshuuraha ee dalka Uganda waxay sheegtay bishii Abriil inaysan habbonayn in marka horeba aan canshuur laga qaadin kitaabaha lagala iibsanayo.
Arrintani ayaa imaanaysa billooyin un ka dib markii waaxda canshuuraha iyo hoggaamiyeyaasha diimaha dalkaasi ay ka wadahadleen.
Xoghayaha guud ee ururka imaamyada iyo muwaacidiinta, Ramadhan Mugalu ayaa u sheegay wargayska in dowladda ay gaartay meel aanan laga filaynin.
“sidee u canshuuri karta hadalka Eebbe”ayuu yidhi xoghayuhu
Waxaa sidoo kale go’aankaasi ka hor yimid oo aan ku faraxsanayn Joshua Kitakule oo ah xoghayaha guud ee golaha diimaha dalkaasi.
Wuxuu sheegay in kutubta aan loogu talo gelin in faa’iido laga sameeyo, balse ay khalad tahay in la canshuuro.
Mas;uuliyiinta diimaha dalka Uganda waxay sheegayaan in qiimaha lagu kala iibsado kitaabka masiixiyiinta uu sare ka kacay.
Xiisad ka Taagnayd Jaziirada Soqotara Ee ay Imaaraadku Qabsadeen Oo la Xaliyay.(Sawirro)
Wasiir Beyle Oo Kormeeray Dib U Dhiska Xarunta Wasaarada Maaliyada.(Sawiro)
Madaxweynaha Uganda Oo Eryey Wasiirkiisii Amniga Iyo Taliyaha Booliska, Soona Bandhigay Sababta Keentay.
Madaxweynaha Dalka Uganda Yuweri Museveni, ayaa xilalkii ay hayeen ka qaaday Wasiirkiisii Amniga iyo taliyihii Booliska, kuwaas oo ahaa saaxiibo ku dhow Maxdaxweynaha. War qoraal ah oo kasoo baxay Yuweri Museveni madaxweynaha dalka Uganda ayaa […]
September 24, 2017 English News
President Museveni has told countries contributing troops to the peace keeping mission in Somalia that they are not United Nations (UN) employees but allies offering pan-Africanism services. The President made the remarks at a meeting […]
Yoweri Musavani: Maraykanku Wuxuu Helay Madaxeynihii Ugu Wanaagsanaa, Waana Ninka Afrika Runta U Sheega
January 24, 2018 Caalamka
Madaxweynaha Uganda Yoweri Musavani ayaa sheegay in uu jecelyahay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, sababtuna tahay maadaamaa uu yahay nin saraaxo badan, islamarkaasna runta u sheega Afrikaanka. Musavani oo hadal ka jeediyay kalfadhi baarlamaanka Bariga Afrika […]